घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर किन ? – SajhaPana
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर किन ?
साझा पाना २०७५ फागुन २४ गते ०७:२९ मा प्रकाशित
घरमा स्वस्थ यौन सम्बन्ध हुँदाहुँदै बाहिरतिर किन त्यस्तो आकर्षण हुन्छ ? मनोविज्ञानले यसलाई कुन रुपमा लिन्छ ?
यसरी बाहिरी आकर्षणमा पर्नु भनेको श्रीमतीलाई धोका दिनु नै हो ? महिलामा यस किसिमको आकर्षण हुन्छ कि हुन्न ?
ट्याग : #श्रीमती